MEGAN LOVE ကျွန်းခွဲစိတ်ကုသခြင်း - ကလေးဘဝကတည်းကသူမရဲ့မျက်နှာ၏အချိန်ဇယား - သတင်း
ကစားကွင်းမှသည် Love Island villa သို့: Megan ၏မျက်နှာသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိဖြစ်သည်
အလှကုန်ခွဲစိတ်ကုသမှုမတိုင်မီနှင့် Love Island ရွာသားများမ ၀ င်မီ Megan Barton-Hanson ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်တကယ့်အဆင့်များစွာ၏တကယ့် Rollercoaster စီးနင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာပေါက်ကြားသောညထွက် pics ရှိခဲ့သည် ထို့နောက် My Big Fat Greek Wedding pic ရှိသည် ငါတို့စိတ်ကိုနှိမ့်ချသောနောက်၊
ယခုသင့်အားအချိန်ဇယားအပြည့်အစုံယူဆောင်လာပါမည်။ ကျွန်မတို့ Megan ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျောင်းကကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသူမကတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်။ £ 25k သည်သူ၏မျက်နှာကိုအံ့ဖွယ်အမှုများပြုခဲ့သော်လည်းသင်၏ငယ်ရွယ်မှုကိုဘယ်တော့မှမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ Kylie အထုပ်သည်သင့်အတွက်များစွာလုပ်ပေးနိုင်သည့်အရာ။
မျှဝေသည် Megan Barton-Hanson 4:29 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 12, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
မကြာသေးမီကသူမ၏နားများကိုနောက်ဆုတ်မထားမီသူမသည်၏ဓာတ်ပုံများသည်သူမ၏ကျောင်းနေရက်များထံမှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူမသည်သူမကျောင်းတွင်ရှိစဉ်ကထွက်သောနားရှိခြင်းကြောင့်အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည် ဤရုပ်ပုံများကို Mirror's site တွင်တွေ့နိုင်သည် (ဒီမှာနှိပ်ပါ) ။
အဘယ်ကြောင့် Megan သည်ထောက်ပံ့ရေးဆရာနှင့်တူသနည်း။ #loveisland pic.twitter.com/85hyMHc2GY
- ဦး လေး Sham (@millenniallpink) ဇူလိုင်လ 4, 2018
သူမကဒီပုံမှာ ၁၂ နှစ်ရှိပြီ၊ တချို့ကသူမရဲ့ My Big Fat Greek Wedding မှမိန်းကလေးနှင့်တူတယ်လို့ပြောကြတယ်။
သို့သော် Megan အကြိုခွဲစိတ်ကုသမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်များဖြစ်ခဲ့သည် ဒီတစ်ခုမင်္ဂလာပါ! မဂ္ဂဇင်း (သူတို့ site ပေါ်တွင်ပုံကိုကြည့်ရန် link ကိုနှိပ်ပါ) သူမတစ်ညတည်းခိုနေစဉ်ဤဓာတ်ပုံများတွင်အနည်းဆုံး ၁၈ ယောက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
နောက်ထပ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မကြာသေးမီကပုံရသည် Megan ၏နောက်ပုံတစ်ပုံရှိသည်။ သို့သော်သူမ၌နှာခေါင်းအလုပ်မရှိသေးပါ၊ နှုတ်ခမ်းဖြည့်သူများ၊ ပါးသုတ်ဆေးများ၊
အလို ? #loveisland
မျှဝေသည် Love ကျွန်းကျွန်း Memes 1:47 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 5, 2018 ရက်တွင် (@loveislandnot)
သူမသည်သာမန်လူတစ် ဦး အတွက်အတော်အတန်လျောက်ပတ်သောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမသည်သူမ၏ Margot Robbie နှင့်တူသော Love Island persona ကိုအတိအကျမပြောနိုင်ပါ။
ထိုအခါငါတို့ Stripper Megan ရှိသည်! ဒီအချိန်မှာသူမမျက်နှာကိုသူမဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာပြောပြဖို့ခဲယဉ်းပေမဲ့သူမကသူမရဲ့ Boobs ယခုအချိန်တွင်လုပ်ပြီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချနိုင်သည်။ ထိုအခါဥပဒေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ditched ။
ပြီးရင်ငါတို့မှာလက်ရှိ Meg ရှိတယ်။ သူမသည်အလှကုန်ခွဲစိတ်ကုသမှုအားလုံးကိုတင်ပြီး Love Island villa သို့ဝင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
ကျွန်မဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုနစ်မြှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ငါသောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့အပြစ်စီရင်ခံရတဲ့အရာတွေကရေကူးတတ်လာပြီ။ - Frida Kahlo?
မျှဝေသည် Megan Barton-Hanson 7:06 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 1, 2018 ရက်တွင် (@meganbartonhanson_)
ဘာပြောင်းလဲမှုလဲ။ မည်သူမဆိုအပို£ 25k ရတယ်?
သငျသညျ fuckzone ၌မှီဝဲလျှင်သင်မည်သို့သိရန်
Genius TikTokers သည်ထောပတ်ဓားဖြင့်သာပုလင်းများကိုဖွင့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုတီထွင်ခဲ့သည်
ဤရွေ့ကား ITV ရဲ့ The Chase အပေါ်အစဉ်အဆက်အနိုင်ရရှိအကြီးမားဆုံးဖြစ်ကြသည်
ဒါကြောင့်နာကျင်ရဲ့ဒါတိကျမှန်ကန်ဖြစ်ကြောင်း UCLA memes များစာရင်းသာ
TikToker တစ်ယောက်သည် Harry Styles နှင့်ကျောင်းသို့သွားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူ၏နှစ်ချုပ်စာအုပ်၌ဖော်ပြထားသည်
Spy Kids မှ Cortez မိသားစုကိုမှတ်မိသလား။ ဤတွင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယခုအထိပါပဲယျ